WALTAJJII MARII HOOGGANSA OL’AANAA FI GAGGEESSITOOTA KTAS | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
Obbo Gammachuu Baqqalaa fi Obbo Guyyoo Waariyoo
Waltajjicha irratti Pirezideentiin MMWO, Kab. Obbo Gazaalii A/Simal, Pirezidaantii I/Aanaan MMWO, Kab. Obbo Guyyoo Waariyoo qooda fudhachaa kan jiran yoo ta’u dhimmootni jajjaboon lama marichaaf dhiyaataniiru. Dhimma jalqabaa gabaasa raawwii hojii baatii jahaa Dhaddachaalee MMWO bu’aa giddugaleessaa 1ffaa (qulqullina kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa fooyyeessuu) fi bu’aa giddugaleessaa 2ffaa (dhaqqabamummaa, si’oominaa fi bu’a qabeessummaa tajaajila abbaa seerummaa fooyyeessuu) irratti haala xiyyeeffateen qophaa’ee gama Daayireektara KTAS MMWO, Obbo Gammachuu Baqqalaatiin dhiyaateera. Kan lammaffaa argannoo odiitii galmee murtiin boodaa kan ilaallatu yoo ta’u kunis gama Dursaa Garee Odiitii Murtiin Boodaa, Obbo Guddataa Qajeelaatiin dhiyaateera.
Waltajjii Marii Hooggansa Ol’aanaa fi Hooggantoota Dhaddachaalee MMWO
Dhiyeessiiwwan lamaan keessatti waantotni gurguddoon armaan gadii hammatamaniiru.
Qulqullina KTAS Gama Fooyyeessuutiin:
1. Galmeewwan oliyyannoon Mana Murtii itti aanutti ilaalamanii diigaman, fooyya’anii fi qajeelfamaan gadi-deebi’an hanqina isaanii xinxaaluun bu’aa argame madaaluun hojjatamaa kan ture ta’uu;
2. Galmeewwan murtii argatan irratti odiitii murtiin boodaa gaggeeffamee hanqinaalee adda baasuun marii Abbootii Seeraaf kan qophaa’e ta’uu;
3. Dandeettii Abbootii Seeraa ijaaruuf leenjii gaggabaabaan ogeessota alaa fi keessaan kennamaa turuu;
4. Sadarkaa dhaddacha ijibbaataa MMWO tti dhimmoota falmisiisoo ta’an mata duree 3 irratti barreeffamni mariif ta’u qophaa’ee lama irratti sadarkaa dhaddachaatti mariin kan irratti gaggeeffame ta’uu;
5. Sababoota diigamuu fi fooyya’uu murtii Manneen Murtii Oromiyaa furmaata isaanii wajjin adda baasuuf qorannoon gaggeeffame mariif dhiyaatee sadarkaa adda addaatti kan irratti mari’atame ta’uun ibsameera.
Hojiiwwan kunniin qulqullina tajaajila abbaa seerummaa irratti bu’aawwan gaarii kan fidan ta’uu agarsiiftota adda addaan agarsiifameera.
-Dhimmoota baatii jaha keessatti dhaddachaalee idilee MMWO irraa gara dhaddacha ijibbaataa MMWO tti iyyataman keessaa %3.2 kan fooyya’an ta’uu fi %5.2 kan diigaman ta’uu fi kan hafan %91.6 kan ta’an cimuun isaanii qulqullinni murtii fooyya’aa dhufuu agarsiisa.
-Bifuma wal fakkaatuun dhimmoota yeroo kana keessatti dhaddacha ijibbaataa MMWO irraa gara dhaddacha ijibbaataa Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa deeman keessaa kan fooyya’e kan hin jirre ta’uu fi %0.35 kan ta’an qofti diigamuun %99.65 kan ta’an cimuu waan agarsiisuuf kunis qulqullinni murtiiwwan dhaddacha ijibbaataa keenya fakkeenyummaa qabaachuu kan agarsiisuudha.
-Galmeewwan dhaddachaalee idilee MMWO saamudni fudhatamee odiitiin murtiin boodaa irratti gaggeeffame keessaa akkaataa qajeelfama jiruun kanneen hanqina qaban %13.8 yoo ta’an, kan dhaddacha ijibbaataa kan hanqina qaban %8.7 irra jiraachuun sadarkaa fooyyee qabu ta’uu agarsiisa.
Bu’aa giddugaleessaa 2ffaa jalatti dhimmi xiyyeeffannoon ilaalame raawwii galmeeti.
1. Dhaddacha Dhaabbii Bahaa(Adaamaa)tti galmeewwan 4117 socho’aa turan keessaa 3367 (%81.78) murtii kan argatan ta’uu;
2. Dhaddacha Dhaabbii Kibbaa (Shaashamannee) tti galmeewwan 1459 ta’an ilaalamaa turanii isaan keessaa 1045 (%71.62) kan ta’an murtii kan argatan ta’uu;
3. Dhaddacha Dhaabbii Lixaa (Naqamtee fi Jimmaa) tti galmeewwan 2148 dhiyaatanii ilaalamaa turan keessaa 1638 (%76.26) kan ta’an murtii kan argatan ta’uu;
4. Dhaddacha Giddugaleessaa (Finfinnee) tti galmeewwan 4301 dhiyaatanii ilaalamaa turan keessaa 3504 (%81.2) kan ta’an murtii kan argatan ta’uu;
5. Dhaddacha Ijibbaataatti galmeewwan 3875 ta’an dhiyaatanii ilaalamaa turan keessaa 3321 (%85.70) kan ta’an fala argachuu, fi
6. Walumaagalatti ji’a jaha keessatti galmeewwan Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa tti dhiyaatanii ilaalamaa turan 15,900 keessaa 12,875 kan ta’an ykn %80.97 kan ta’an murtii argachuun ibsameera.
Hirmaattotnis dhimmota dhiyaatan lamaan irratti marii bilchina qabu gaggeessaniiru; sadarkaa kenniinsi tajaajila abbaa seerummaa Mana Murtichaa irra jiru irratti gammachuu akka qaban ibsanii waantota akka hanqinaaleetti ka’an yeroo itti aanutti ciminaan kan irratti hojjatan ta’uu kaasaniiru.
Guduunfaa waltajjichaa irratti kallattii fuulduraa kan kennan Pirezidaantiin MMWO, Kab. Obbo Gazaalii A/Simal fi Pirezidaantii Itti Aanaan MMWO, Kab. Obbo Guyyaa Waariyoo, rakkoowwan akka COVID-19 fi kanneen biroo keessatti hojiin baatiiwwan jahan darban hojjataman daraan gaarii ta’uu; hanqinaalee odiitii galmee murtiin boodaan adda bahan, rakkoolee naamusaa fi kanneen biroo adda bahan furuu irratti xiyyeeffannoon hojjachuu kan gaafatu ta’uu ibsanii, mariin wal fakkaataan Abbootii Seeraa Mana Murtichaa waliin yeroo itti aanutti ni gaggeeffama jedhaniiru.